कसरी पकाएको खानेकुरा विषात्त ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी पकाएको खानेकुरा विषात्त ?
अक्सर हामी खानेकुरा पकाउँदा त्यो कति स्वस्थ्यकर बनाउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्र्दैनौं । केवल जिब्रोको स्वादलाई ध्यान दिन्छौं । सामान्यत, हामी बासी खानेकुरालाई पुन भुटेर, तताएर खान्छौं । यसो गर्दा ति खानेकुराको पोषक तत्व त नष्ट हुन्छ नै, थप विषाक्त पनि बन्छ । अर्थात खानेकुराको नाममा हामी बिष सेवन गर्न पुग्छौं ।
हामी स्वादको लागि डिप फ्राई गरेर खानेकुरा सेवन गर्छौ । तर, यो एकदमै हानिकारक हुन्छ । डिप फ्राई गर्दा त्यसको भाँडामा रहेको केमिकल खानेकुरामा मिसिन्छ । खानेकुरामा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । अत्याधिक तताइएको तेल पनि विषाक्त बन्छ । त्यसैले संभव भएसम्म डिप फ्राई खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन । (अनलाइनखबर बाट सभार)